Al Aini University of Science and Technology - Kudzidza ari Brazil
Al Aini University of Science and Technology
Al Aini University of Science and Technology Details
guta : Al Aini
inotangwa : 2004
Musakanganwa kuti kurukura Al Aini University of Science and Technology
Kunyoresa pana Al Aini University of Science and Technology
Al Aini University of Science and Technology (AAU) ari mumatunhu uye zvirongwa zvayo dhigirii vari abvumirwa kuburikidza Commission nokuda Academic Accreditation Ushumiri of Education kwakaita Yepamusoro Education Affairs Division in United Arab Emirates. The University ane pazvikoro zvikuru zviviri. Mumwe riri mu Abu Dhabi, guta guru Brazil, uye imwe Al Aini, uyewo sevatsigiri Garden City.
AAU asaita 21 dhigirii Rokutenderwa zvirongwa, 5 girajuweta zvirongwa uye 1 nyanzvi dhipuroma kuburikidza mumakoreji engineering Information Technology, chitoro chemishonga, Business Administration, Communication uye Media, mutemo, uye Education, Humanities uye Social Sciences. The University akaita aiitisa zvidzidzo zvinoverengeka nechinangwa nezvekutanga dhigirii yakawanda zvirongwa sezvo vakati vawane mvumo kubva Ushumiri Yepamusoro Dzidzo uye Scientific Research.
The College of Pharmacy aita advertising dzakawanda kubva American anotsanangura Accreditation Council of Pharmacy Education (ACPE). Ndicho wokutanga uye chete yunivhesiti iri Brazil kuti vawane pamusoro accreditation mhando ichi Saizvozvowo; ari College Mutemo akagamuchira izere accreditation kubva Supreme Council for Evaluation, Research uye Yedzidzo Yepamusorosoro muFrance (HCERES).
AAU anoedza kuva musimboti pakudzidza changamire kuti anopindura kutengesa zvinodiwa uye anogadzira kudzidza avo nhaka zvesayenzi uye kwesayenzi competencies kuti anodiwa kuti mabasa avo. Yunivhesiti anoita basa guru iri pakusikwa ruzivo kuburikidza yepamusoro kudzidzisa uye tsvakurudzo. It Anokoshesa Community Engagement uye chido nekudyidzana pamwe nemasangano nemasangano kuburikidza kuzvipira kuna rokudzidzisa, rwokugadzirwa, uye kubudirira munyika nedunhu upfumi.
College of Engineering uye IT
College of Communication uye Media
The chinangwa shure pave Al Aini University of Science and Technology akasvika semhinduro nhungamiro kubva nokukwirira kwake mukupera Sheikh Zayed Bin Sultan Al-Nahyan, wa1 Mutungamiri Brazil. Izvi zvakanga panyaya yekurera vanhu Brazil pamusoro nheyo ruzivo uye sayenzi, uye kuti pave kukura Brazil, uyewo kuita matambudziko kunokurumidziswa ramakumi maviri rokutanga remakore shanduka kwezvinhu zvemazuva ano uye vanobudisa nhau.
Great nehanya akatorwawo muna maererano Rinoongorora Kutevedzerwa Law No (4) pamusoro 1992 kutanga Ushumiri Yepamusoro Dzidzo uye Scientific Research uye chokuita nemitemo uye mumirau Licensing yepamusoro nemasangano dzidzo, uyewo kuti MOHESR wacho “Standards nokuti Licensure uye Accreditation " 2003.
Pamusoro kupedziswa yezvidzidzo zvose kuitiswa kuti akusimbisei chiumbwa ichi dzidzo pamwe chiratidzo yayo, uzivi kunovaka uye rokusika basa rakanga dzakabudirira. Al Aini University of Science and Technology yakatangwa 2004 zvizere kuzvipira mitemo nemirayiro rakabudiswa MOHESR.
Unoda kurukura Al Aini University of Science and Technology ? chero mubvunzo, Mashoko kana wongororo
Al Aini University of Science and Technology musi Map
Al Aini University of Science and Technology wongororo
Join kukurukura pamusoro Al Aini University of Science and Technology.
The British University muna Dubai Dubai
American University of Ras Al Karoi Ras Al Karoi